လူလိုနေတယ် | Lionslayer : The Legend
5 Responses to “လူလိုနေတယ်”
Thet Naung Htut says:
I absolutely support this fact. We need well to translate our language in support of translator. That which is most important. Technical is nothing, only Language is the most significant. Let`s try this fact in basic.
နက်နဲတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေတွေကိုတော့ အခုထိ ကျန်တဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ ဖတ်လို့ နားမလည်နိုင်သေးတာ အမှန်ပဲဗျို့။ ဆရာတော်တွေ သံဃာတော်တွေ မြန်မာလို ရေးတဲ့၊ ဟောတဲ့ ပြောတဲ့ တရား ဓမ္မတွေက တဆင့်သာ တရားဓမ္မ ဆိုတာကို ဖတ်ရှုနားလည် သဘောပေါက် လာရပါတယ်။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တင် မြန်မာစာဟာ ဆက်လက် တည်တံ့အောင်လည်း လုပ်ရမယ့်၊ နောက်ထပ်လည်း ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ တိုးတက်စည်ပင်အောင် လုပ်ရမယ့်၊ လုပ်လည်း လုပ်သင့်တဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုဆိုတာ ချွင်းချက်မရှိ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေ အတွက်လည်း အလားတူပါပဲ။ ရေခြား မြေခြားမှာ နေနေကြတဲ့ တိုင်းတပါးသားတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ပြောဆို ဆက်ဆံဖို့ အတွက်တောင် သူတို့ ဘာသာစကားတွေကို သင်ပြီး၊ သူတို့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံမှု လုပ်ရသေးတာပဲ။ တစ်မြေတည်းနေ၊ တစ်ရေတည်းသောက်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သားတွေ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ဘာသာ စကားကို တစ်ယောက်သိရှိနားလည်ပြီး အချင်းချင်း ယိုင်းပင်းကူညီလို့ တစ်ယောက် ယဉ်ကျေးမှုကို နောက်တစ်ယောက်က ဖွံ့ဖြိုးအောင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ကြမယ် ဆိုရင် အတိုင်းထက် အလွန်ပါပဲဗျာ။
I already connected with My.wiki till yesterday. Carry on bro .
ကူညီရမယ့်သူေတွက ဘယ်လုိဆက်သွယ်ရမလဲ ပါေရးရင် ပိုေကာင်းမယ်ထင်ပါတယ် 😀 cheer!
Easiest way is to contribute to Wikipedia and Wiktionary. 🙂
LeaveaReply to Thet Naung Htut